6­ Sano ayuu saaxiib ila Ahaa laakiin waxaan ka waayay Galmo ”Ayay Tiri.. | Gaaloos.com
Home » galmada » 6­ Sano ayuu saaxiib ila Ahaa laakiin waxaan ka waayay Galmo ”Ayay Tiri..
6­ Sano ayuu saaxiib ila Ahaa laakiin waxaan ka waayay Galmo ”Ayay Tiri..
Waxaan Saaxiibo ahayn in ka badan Lix sano,xaqiiqdii waan jeclaa waxaana u arkayay Mustaqbalkeen inkastoo ilaa iyo hada si wada jir ah u wada seexan. Markii ugu horeysay oo aan bilownay inaan kulano,wuxuu ahaa ruux jecel inuu dhibaateeyo ama carqaladeeyo,mana awoodin inaan si wanaagsan u wada kulano una caweyno.
Laakiin aniga waan ka wel welayay inaan agtiisa ka dheeraado,wuxuu ahaa ruux aan aad u jecelaa uu aan ka maarmeyn. Sidoo kale,Haweeneydaan oo Lixda bilood saaxiibada ahaayeen Wiilkaan ayaa sheegtay inaysan wax galmo ah aysan sameyn mudo ku siman Lix bilood. Waxay sheegtay inuu ahaa ruux aaminsan inuusan dhicin wax galmo ah ka hor intaan la is guursan.
Haweeneydaan oo hadalkeeda u muuqda inay daneyneysay ka hor guurka inay Galmo la sameyso wiilka saaxiibada ay la tahay ayaa ku gacan seertay,waxayna u aragtay arintaasi mid aan u wanaagsaneyn Labada Qof oo saaxiibada ah.
Ugu danbeyn arintaan Galmo la’aanta ee Lixda bilood dhexmaray Labadan Qof ee saaxiibada ah ayaa sababtay inay kala tagaan,islamarkaana xiriirkooda meesha uu ku idlaado.
Sheekadaan Gabadhaan magaceeda la qariyay ayaa noqotay mid Cajiib badan oo warbaahinta qaarkooda ay qoreen. “ Waxaan gabi ahaaba la qariiyay halka sheekadaan ay ka dhacday iyo magacyada Labada Qof.
Waxaa Qoray Sheekadaan Wargeyska Standard Digital
Title: 6­ Sano ayuu saaxiib ila Ahaa laakiin waxaan ka waayay Galmo ”Ayay Tiri..
Posted by galmada Net, Published at 9:03 PM and have 0 comments